कोरोना अनुभव: यस्तो पो सरकारी अस्पताल! स्वास्थ्यकर्मी हुनु त...... - Narayanionline.com
कोरोना अनुभव: यस्तो पो सरकारी अस्पताल! स्वास्थ्यकर्मी हुनु त……
काठमाडौँ, मङ्सिर १४
उठ्न कोशिस गरेँ । खुट्टा टेकिएनन् । छिप्पिँदो रातले बिहानीको प्रतीक्षा गर्दै थियो । कसलाई के भनौँ रु लाग्यो जीवन यति नै रहेछ कि १ श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो छँदै थियो । कोठा उज्यालो थियो । आशाका किरण धपक्क निभे । आँखा घुमे, जता हे¥यो, सर्वत्र अन्धकार । साहस हराउँदै थियो ।
कोठाको अर्को कुनामा रहेकी जीवनसङ्गिनी निदाउने प्रयासमा थिइन् । उनी स्वयं कोभिडसँग जुध्दै थिइन् । परिवारजन, इष्टमित्र, साथी तथा छरछिमेकी सम्झेँ । भरैभरमा टिकेको जीवनजगत् न समाउने ठाउँ, न अडिने स्थान देखेँ । आधार सकिएको जस्तो लाग्यो । कतिपयका फोनको जवाफ पाएर लाग्यो, आफन्त र साथीसङ्गी भनेका त सुखका लागिरहेछन् कि १ दुईदशक भन्दाबढी कस्तो पत्रकारितामा बिताएछु रु भन्ने प्रश्नले मलाई गिज्याइरह्यो । पछिल्ला दशकमा स्वास्थ्य पत्रकारितामा रमाउँदा पाएका सफलता क्षणिक लाग्यो ।
अन्तिम विकल्प चिकित्सकलाई सम्झेँ । फोनमा पहिलो चिनजान र कुराकानी गरेका चिकित्सकलाई मध्यरातमा फोन लगाएँ । दुई घण्टीमा नै उहाँले फोन उठाइदिनुभयो । सुन्दर जीवन सकिएको रहेनछ । आशा पलायो । सबैका मन कहाँ उस्तै हुँदोरहेछ र १ स्वार्थको भीडमा मानवता सजिलै कहाँ हराउँदो रहेछ र रु
“शरीर कमजोर पार्न सक्छ । अक्सिजन लेबल झरेको हुन सक्छ । झ्याल बन्द छन् भने खुला गरिदिनुुस् । घोप्टो परेर सुत्नु होला । झोलिलो खानेकुरा जति सकिन्छ खानुहोला । आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास नछाड्नुहोला । नआत्तिनुहोला । श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने म छु, तुरुन्त केही व्यवस्था गरौँला । सिटामोल खाइहाल्नुहोस्”, डा प्रवीन नेपालले फोनमा सुझाउँदै जानुभयो । यसैलाई पालना गरेँ । रातले बिहानीको सङ्केत गर्दै थियो । पीडा कम हुँदै गयो । घोप्टो परेर सुत्दा अक्सिनको मात्रा बढ्ने रहेछ । सूर्योदयसँगै नयाँ जीवनको शुरुआत भएकोे महसुस गरेँ । कोरोना मसँग अवश्य पराजित हुन्छ र गर्छु भन्ने दृढता उर्लेर आयो । ‘चिकित्सक भगवान् हुन्’ भन्ने कुरा यसै भनिएको रहेनछ । स्वास्थ्यकर्मीको मीठो बोली, सहज उपलब्धता, सरल व्यवहारले सङ्क्रमितको मनोबल उच्च हँुदोरहेछ । यही कुरा सङ्क्रमितले स्वास्थ्यकर्मीबाट अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । यसले कोरोनालाई परास्त गर्न सामथ्र्य प्राप्त हुँदोरहेछ । मेरो अनुभव यही रह्यो।
गत चैतदेखि अस्पताल व्यवस्थापनले कोभिड र अन्य बिरामीलाई सहज उपचार सेवाका लागि अलगअलग नयाँ मार्गदर्शन लागू गरेको थियो । यसले अस्पतालको सेवा अझ छिटोछरितो र चुस्त पारेको छ । अस्पतालले भर्ना भएका कोरोनाका बिरामीलाई आवश्यक सबै सन्तुष्टि दियो र दिँदैछ । बिरामीले निजी अस्पतालमा जस्तो दैनिक हजारौँ खर्च गर्दा नपाइने चिकित्सकीय सेवा, खानपान तथा अन्य बन्दोबस्ती निःशुल्क पाएँ । अस्पतालबाट कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेहरु भन्छन्, “अस्पताल हुनु त यस्तो पो । पुनर्जन्म लियौँ । धन्य १ एपिएफका स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापक । चाहे के गर्न नसकिँदो रहेछ र रु उपचार सेवा, स्वास्थ्यकर्मीका बोली व्यवहार, खानपान र भौतिक बन्दोबस्ती व्यवस्थामा अभाव छैन ।” हालै १० दिन अस्पतालमा भर्ना भई ज्वरो निको हुनुभएका धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका– ७ का राममणि खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारी अस्पताल हुन त एपिएफ जस्तो । स्वास्थ्यकर्मीका सेवा , मीठो बोलिवचन, सरसफाइ र खाना राम्रो लाग्यो । बिरामीलाई उपचार त छँदैछ, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकले बिरामीको पीडालाई राम्ररी बुझ्ने गर्नुहुँदोरहेछ ।”
उहाँले कोरोना उपचार र अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनमा तल्लीन हुँदाहुँदै सङ्क्रमणसित जुध्नुप¥यो । ठट्टा गरी हाँस्दै भन्नुभयो, “कोभिडमा काम गर्नेले कोभिड हुनुपर्दोरहेछ । यसबाट समग्र व्यवस्थापनमा छिटो सुधार गर्न थप बल मिल्ने रहेछ ।”
अस्पतालका अनुसार कोरोनाबाट अस्पतालमा हालसम्म ४२ जनाको मात्र मृत्यु भएको छ । अन्य कोभिड अस्पतालको तुलनामा यो मृत्यु सङ्ख्या कम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । फोकल पर्सन डा नेपालका अनुसार मृत्यु हुनेमा लगभग ७० प्रतिशत दीर्घरोगी छन्।
“अस्पतालमा आएका बिरामीको मृत्यु नहोस् भन्ने हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो, यसैमा हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति केन्द्रित छ । गम्भीर अवस्थामा अस्पताल आएका कारण मृत्यु बढी देखिएको हो । अन्य अस्पतालका तुलनामा मृत्यु सङ्ख्या कम रहेको छ । कतिपय त एम्बुलेन्समा नै मृत्यु भएर पनि अस्पताल आइपुग्दछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।रासस
कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान शुरु, दक्षिण एशियामा खोप अभियान चलाउने दोस्रो मुलुक बन्यो नेपाल
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आज प्रधानमन्त्री ओलीबाट शुभारम्भ
लकडाउनले बढे आत्महत्याका घटना
गण्डकी बैंकले बाड्यो विद्यार्थीलाई स्टेशनरी र झोला
चिकित्सक संघको निर्वाचनमा चितवनमा आज र भोलि मतदान
बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत थप १८ जनाले जिते कोरोनालाई
राजनीति हाबी भएपछि एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष महतोद्वारा सम्मेलन बहिष्कार
‘पद्मिनी’ ब्राण्डको नयाँ मसला बजारमा